AMP Plugin mit AMP-Live-List-Funktion - SN
AMP plug-in ine AMP mhenyu runyorwa basa
Iyo Inomhanyisa-Mobile-Mapeji (AMP) jenareta yekugadzira mapeji eGoogle AMP , AMP plugins uye AMPHTML tag jenareta shandisa AMP mhenyu runyorwa basa uye inomisikidza yega data mhenyu pane yega yega yakagadzirwa AMP Side.
<amp-live-list> -Tag kubatanidzwa
Iyo Inokurumidza Mobile Mapeji jenareta inogadzira otomatiki AMP vhezheni ine otomatiki chinyorwa kugadzirisa basa uchishandisa <amp-live-list> tag. Nenzira iyi, ese AMP masaiti ane mhando yekurarama blog basa.
Kana mushandisi akatarisa AMP vhezheni yewebhusaiti uye paine zvinhu zvitsva zveiyi peji AMP panguva ino, iyo peji AMP inoziva kuti nyowani, yakawanda-yazvino-vhezheni vhezheni inowanikwa.
Iyo AMP peji inozivisa mushandisi weanenge aripo echinyorwa kugadzirisa paunenge uchiverenga, pasina mushandisi achifanira kurodha zvakare iyo AMP peji!
Bhatani rinoratidzwa kune mushandisi nekuda kwechinangwa ichi. Kana mushandisi akadhinda iyo AMP chinyorwa chekuvandudza bhatani, iyo nyowani AMP vhezheni inotakura nekukasira mune inozivikanwa AMP kumhanya! Izvi zvinogonesa kupfupisa kurodha nguva pane nekuzadza zvakare kurizere uye nguva dzose kunoita kuti mushandisi ave nezvazvino .. Semuenzaniso, mhenyu matiki anogona kugoneswa ne AMP.
Iyo Inokurumidza Mapeji eMapeji jenareta inogadzira iyo AMP peji iyo inotumira chikumbiro kune AMP peji sevha (semuenzaniso iyo Google server) masekondi gumi nematanhatu uye ichitarisa kana iri nyowani vhezheni vhezheni iripo. Kana paine chinyorwa chitsva chinyorwa, iyo AMP peji inoratidza mushandisi chiziviso che AMP muchimiro chechinyorwa chekuvandudza bhatani.